Ra'iisul-wasaaraha Soomaaliya oo afur u sameeyay wakiillo ka socda warbaahinta - Sabahionline.com
Ra'iisul-wasaaraha Soomaaliya oo afur u sameeyay wakiillo ka socda warbaahinta
Luulyo 25, 2012
Ra'iisul-wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali ayaa Talaadadii (24-kii July) marti-qaad afur ah u sameeyay wakiillo ka kala socda war baahinta Muqdisho, sidaana waxa sheegay Radio Bar-Kulan-ka ay Qaramada Midoobay maal-galiso.
Madaxda Soomaaliyeed oo ciidamada qalabka sida ku bogaadiyey munaasabadda sanad-guurada 52aad
Dawladda Soomaaliya oo maamullo u samaynaysa gobollada la xoreeyey
Soomaalida oo u dabaal-dagtay 52-guuradii kasoo wareegatay markii ay madax-bannaanidii ka qaateen Ingiriiska
Maamulayaasha dhowr raadiyo iyo telefishin, iyo sidoo kale saraakiil sare oo ka tirsan dawladda, ayaa ka soo qayb-galay afurka.
Cali ayaa uga faa'idaystay munaasabadda in uu ka tacsiyeeyo saxafiyiintii Soomaaliyeed ee lagu dilay ama ku dhaawcamay tan iyo biloowgii sannadkan, isla markaana uu uga mahadceliyo saxaafadda sida ay ugu ololeeyaan isa saamaxaadda iyo nabadda iyada oo saxafiyiinta Soomaalyeed ay waajahayaan duruufahaas adag. Tan iyo biloowgii sannadkan, waxa si isa soo taraysa kor ugu soo kacayay weerrarada lagu hayo saxafiyiinta Soomaaliyeed. Haya'dda ilaalisa xuriyadda saxaafadda ee Saxafiyiinta Bilaa Xuduudka ah ayaa ku tilmaamay Soomaaliya dalka ugu badan Afrika ee ay ku dhintaan saxafiyiintu.